एउटै उदेश्य – हजारौँ बच्चा की आमा बन्ने | dhamakadaily.com ::
एउटै उदेश्य – हजारौँ बच्चा की आमा बन्ने
शितल आचार्य || 417 Views || Published Date : 23rd August 2016 |
हरेक व्याक्तिको आ–आफनै कहानी हुन्छ । त्यही कहानीमा विभिन्न तत्वहरु हुन्छन । जसकारण दुःख सुःखलाई एउटै सिक्काको दुई पाटाको रुपमा लि न्छ । प्राय मानिसहरुले आफनो जीवनको थुप्रै उद्देश्य बनाएका हुन्छन । कसैले आफना उद्देश्य पुरा गर्दछन त कसैले विडम्बनाका साथ आफना उद्देश्यहरु लाई उद्देश्यमै सिमित राख्छन् । कोही आफनो उद्देश्य पुरा गर्न हजारौ पटक असफल भएता पनि सफलतको लागी संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् ।
हामीलाई थाहा छ, थोमस अल्वा एडिसनले एउटा बल्वको आविस्कार गर्न सँयौ पटकको असफललाई पन्छाउँदै सफलतालाई चुकेका थिए, त्यस्तै उदाहरणका अर्का पात्र पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपती अब्राहम लिङकल जो जिवनमा ९९ पटक असफल भएर अन्तत राष्ट्रपति जस्तो पदमा विजयी भएका थिए । नेपाली विरङगना पासाङ ल्यामु सेर्पा आरोहणका क्रममा चार पटक सम्मा आसफलतालाई पन्छाउँदै सफलता हात पारेर नारीमा हुने आट र सहासलाई प्रस्फुटन गरेकी हुन ।
त्यसैले जब मानिसले आफनो उद्देश्य पुरा गर्न दृढ विश्वास लिएर मेहेनतका साथ परिश्रम गर्छ । त्यो व्याक्ति एक न एकपटक अवश्य सफल हुन्छ ।
“उद्देश्य के लिनु उडि छुनु चन्द्र एक” सारै मिठो र सार्थक लाग्छ देशको माटोको यो वाक्य आउँन थाल्छ आँट र सहास ठुलो उद्देश्य बोकी आफु सफल र असफल बन्दै समाज र राष्ट्रलाई पनि असल बनाउँन अन्धकारमा रहेका हरुलाई उज्यालो ज्योती छरेर संगै हाते मालो गर्दै विकासका मुल फुटाउने उद्देश्य लिनु छ । गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठेर आफनो उद्देश्य पुरा गर्न लाग्नु पर्छ । सबैले आ– आफना उद्देश्य पुरा गर्न लाग्ने हो भने देश आफै विकास हुन्छ । आफै शान्त हुन्छ अनि आफै संमृद्ध बन्छ । धेरैका उद्देश्य जस्तै मेरो पनि एउटा उद्देश्य छ । हजारौँ बच्चा कि आमा बन्ने जसका लागी म दिनरात नभनी मेहेनत र परिश्रम गरिराखेको छु । नौँ महिना कोखमा राखेर जन्माउँदैमा एउटा नारी आमा बन्न सक्दिन । आमा बन्न त ३२ गुनमा २५ गुन हुनुपर्छ । जो नारिले आफुमा २५ वटा गुणलाई राख्न सक्छे उ मात्र आमा बन्न सक्छे । मलाई म प्रति विश्वास छ । किनकि मैले उद्देश्य ठुलो लिएर परिश्रम गरिरहेकि छु । हरेक दिन हरेक समय मेरो लागी फरक भएर अगाडि बढिरहेको छ । म संग समयलाई पटक्क समातेर राख्न सक्ने क्षमता त छैन । तर मलाई यो विश्वास छ कि म समयको साथ–साथमा हिड्न सक्छु ।
हजारौँ बच्चाको आमा बन्ने रहर सजिलो तरिकाले पैदा भएको हैन । जसरी पैदा भयो त्यो भन्दा हजारौँ गुण बढि चुनौति म माथी छन । जस्ले मलाई सफल बनाउँन कोसे ढुङगाको काम गर्दै छन मेरो लागी असफलतानै सफलताको प्रतिक हो मलाई परिश्रम गर्न कुनै लाज लाग्दैन । किनकि मलाई मेरो उद्देश्यमा सफल बन्नु छ । मलाई हुम्लामा गएर ति कलिला मुनाहरु, जो अन्धकारमा रुमलिरहेका छन । उनिहरुलाई विहानीको सुर्यको किरणले उज्यालो प्रकाश दिनु छ । हातमा हात र काँधका काँध राखेर देशमा शान्तिको विगुल भर्नु छ । विश्वमान चित्र पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौँ ।
एक कलम, एक कापी र एक व्याक्तिले विश्वमानचित्रमा परिवर्तनको विगुल फुकेको । मेरो उमेरको एउटा पाकिस्तानकी नारी मलला यूसुफजाई जस्ले अफगानिस्तानको नारी शिक्षा मात्र हैन विश्व कै शिक्षा क्षेत्रको मुहार फेर्न सफल भईन । सदैभ आफनै उद्देश्यमा अडिक रहने मललालाई ताईवानको गोलिले समेत उसको उद्देश्यलाई मार्न सकेन अन्तत उनि हजारौँ कस्ट संग जुधेर आफनो उद्देश्यमा पुग्न सफल भईन यस्तै मदर टेरेसा, फलोरेन्स नाईटिङगेल्स जस्ता नारीले विश्वको मुहार बदलेको पाईन्छ । के उनिहरुले पैसा भएरै यस्तो गरेका हुन ? नभएर पनि यस्तो गरेका होइनन । यो त मानव जाति भै सके पछि अन्तरआत्मा उत्पन्न हुने उद्देश्य हो ।
अरु प्रतिको असल व्यवहार हो । सबैमा दया, माया प्रेम उत्पन्न हुन सक्दैन । एकदम कम मान्छे संग हुन्छ । कसैले अन्तर आत्मामै हराउने गर्दछन त कसैले समाजमा देखाउँन र अरुलाई पनि पाठ सिकाउँछन । नेपालकै वर्तमान अवस्था लाई हेर्नेहो भने । शिक्षा वाल वालिकाको लागी र देशका लागी धेरै आमाहरुले संघर्ष गरिरहेका छन । जस्तै सुनिता दनुवार आदी………।
म जन्मीनु भन्दा अगाडि कती नारिहरु विश्वकै आमा बनिसकेका छन । म हजारौँ बच्चा कि आमा बन्न सक्दिन ? मैले यो सोच्नु गलत हो । कदापी गलत हो जस्तो मलाई लाग्दैन । १६ वर्षकि मललाले देश परिवर्तन गर्न सक्छे भने १८ वर्षकि शितलले देश परिवर्तन गर्न सक्दिन । अहिलेको वर्तमान अवस्था मेरो उद्देश्यको लागी अतिनै चुनौति पुर्ण हुन सक्छ तर पनि म खुसी छु । किन कि चुनौति संग लडेर प्राप्त गरेको सफलताको फल चाखेकी छु । अति मिठो हुन्छ । त्यसैले मेरो अनवरथ संघर्ष एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागी हजारौँ बच्चा कि आमा बन्ने हो ।
One Response to एउटै उदेश्य – हजारौँ बच्चा की आमा बन्ने
bhahis aama bhai bahinai ra ramro sang here baigo